Mpanome Rà Efatra Avy Ao India No Namonjy Lehilahy Iray Tao Bangladesh Tamin’ny Fanomezana Rà Tsy Fahita Firy. Ankehitriny Inona No Nambaranareo Mikasika Ireo Sisintany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2016 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Español, Ελληνικά, عربي, 日本語, English
Sary maneho ny firafitry ny molekiolan'ny ABO (H), firafitry ny anitgène. Sary avy amin'ny Wikipedia
Manome rà, manome aina hoy ny olona. Lehilahy iray 25 taona antsoina hoe Kamruzzaman avy ao Dhaka no nahiditra hopitaly tamin'ny 21 May teo taorian'ny loza. Nilàna fampidiran-drà maika izy hiatrehana ny fandidiana noho ireo fahatapahana marobe nahazo azy. Efa tsikaritr'ireo dokotera anefa fa karazan-drà tsy fahita firy ao Bombay ny an'ilay tovolahy. Taorian'ny fikarohana fatratra natao tamin'ireo mpanomé rà 50 tao Bangladesh, nahavita nanangona rà avy amin'ireo mpanome rà efatra tao Mumbai ny fikambanana Think Foundation tao Mumbai: Swapna Sawant, Krishnand Kori, Mehui Bhelekar, ary Pravin Shinde. Iray amin'ireo naman'i Kamruzzaman no nitondra ny rà avy any India ary nampiasaina tamin'ny fandidiana mba hanavotana ny ainy.
Nizara ity lahatsary ity ny vondrona Better India:
Nanoratra tao amin'ny facebook, nizara izao manaraka izao mikasika ny sokajin-drà tsy fahita firy i Rajesh Warna:
Ao India, olona maherin'ny 400 no fantatra fa manana ny Sokajin-drà Bombay. Ito manaraka ito ny lisitra antsipirihany mikasika io sokajin-drà tsy fahita firy io:
1. Ity no tena sokajy ABO tsy fahita firy indrindra, io no fiantso azy satria olona sasany avy ao Bombay no nahitàna azy voalohany (Mumbai ankehitriny).
2. Tsy voafetra ho an'ireo Indiana Tatsinanana ihany io sokajin-drà io fa ho an'ireo mponina ao Kaokazy, Japana, sy ny sisa ihany koa.
3. Ao anatin'ny sokajin-drà Bombay, tsy misy antigène H. Vokatr'izay, ireo manana sokajin-drà A, B, AB ary O, izay fototra hisehoan'ny H, dia tena tsy fantatra ao amin'ireo olona manana sokajin-drà Bombay.
4. 50 taona lasa izay no nahitàna azy io tao amin'ny toeram-pitsaboana KEM tao Parel raha tonga nitsabo tena tao ny marary iray ary nampiseho fandavàna ny sokajin-drà O.
5. Tsy tokony ampidirana rà avy amin'ny vondrona hafa mihintsy ireo olona ao anaty sokajin-drà Bombay.
Nihevitra i Himadri Shekhar Nath fa ilain'ny olona ny mampiseho matetika io karazana fiarahamonina manerantany io:
Tena faran'izany mila mafy io karazana fitsinjovana ny maha-olona tsy ijerena sisintany io mihintsy isika, izay andrasana mba hiainana fiainana iray lafatra eto amin'ity tany ity….
Misaotra tamin'ny famonjena aina iray sy fianakaviana iray manontolo tsy ho tratry ny faharavàna……. ireny ohatra mamy ireny no mandrisika antsika hanao asa tsara hatrany ho an'ny zanak'olombelona.
Nankalaza ilay fanomezan-drà ho toy ny “fanomezana” fanamafisana-karazana i Anirban Roy:
Tsara fo efatra no nandefa ny fanomezany mba hamonjena aina iray! Mbola misy hatrany ny fitsinjovana ny maha-olombelona!
Nilaza i Samia Mohsin fa nasehon'ireo mpanome rà hoe tsy voazarazara ara-panahy ny olona:
Voaporofo indray fa natao ho an'ny olombelona ny olombelona. Tsy maninona na miezaka ny hizarazara azy ireo amin'ny fefy vy eo amin'ny sisintany na hamindra azy ireo araka ny lalàna aza ianareo, ny olombelona no ambony noho ny rehetra. Any amin'izay fitiavana no misolo ireo tsy fitoviam-pinoana rehetra, ireo fahasamihafan'ny volon-koditra sy fiteny. Miarahaba anareo (ireo mpanome rà efatra avy ao India) amin'ny anaran'ireo mponina 160 tapitrisa ao Bangladesh aho. Tsy fantatray fa hay manana io sokajin-drà tsy fahita firy io ianareo. Tsy ho voahonitra amin'ny fisaorana fotsiny ny soa nataonareo tamin'io lehilahy Bangladeshi io. Tsy azonareo averina amin'ny fisaorana fotsiny ny trosan-drà. Trosa izay entinay mandrakizay.
Araka ireo tatitra farany, nahomby ny fandidiana an'i Kamruzzaman ary efa miandry fahasitranana izy izao. Araka ny voalaza, talanjona ny rahalahiny zokiny indrindra, Masud Alam, fa ràn'olona efatra avy amin'ny firenena hafa no nahavonjy ny ain-drahalahiny ankehitriny.